Bakha i-chess ngepuleti Arduino UNO | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Kunezinhlobo eziningana ze-chess ezakhiwe nge-Free Hardware. Inhloso yabadlali abaningi be-chess ukwakha i-chess ye-elekthronikhi umuntu angadlala ngayo ngokumelene nomshini noma umane nje ukunyakaza kwabo kugcinwe futhi kuthunyelwe ngekhompyutha.
Kulokhu sinomshini ofanayo othi ingadlala i-chess futhi ingasusa izingcezu zethu, kodwa okumangazayo ukuthi i-hardware yayo ayinamandla amakhulu, idinga ipuleti kuphela Arduino UNO.
Ipuleti le Arduino UNO yipuleti elithengekayo kwabaningi kepha futhi alinamandla amakhulu uma siyiqhathanisa namanye amabhodi afana ne-Arduino MEGA noma i-Raspberry Pi. Ngokuhambisana nokusetshenziswa kwaleli bhodi, uRoboAvatar, umakhi wale phrojekthi, usebenzise isakhiwo seXYZ, isakhiwo esifanayo esisetshenziswa kumaphrinta e-3D.
Lesi sakhiwo sizosizwa ngezingcezu zikazibuthe ezizovumela umshini ukuthi uthole izingcezu ezibekiwe ngokunembile. Ngaphezu kwe Arduino UNO nesakhiwo, I-RoboAvatar isebenzise iMax Shield kanye nama-MCP23017 I / O chips wokunweba. Ngaphezu kwalokho, umdali usungule uhlelo lwePython olusiza ukusebenzisa yonke i-hardware ngomphumela olandelayo womdlalo we-Chess.
Ngenhlanhla le phrojekthi imahhala futhi ingakhiwa noma nini. Ngalokhu kufanele sithole kuphela izinto zokwakha futhi sizakhe ngokuya ngezinyathelo ze- umhlahlandlela wokwakha ukuthi iRoboAvatar ikuthumele ku-Instructables. Futhi lapho singathola khona yonke isoftware edingekayo yokwenza iphrojekthi isebenze.
Le phrojekthi yomshini we-chess iyathakazelisa kakhulu, kepha ayimisi ube yisixazululo esibizayo sohlelo lwe-computer chess. Yize umqondo wokusebenzisa ipuleti Arduino UNO kulolu hlobo lwephrojekthi lubonakala luthakazelisa kakhulu futhi kungahle kube nokwenzeka ukwakha iphrinta ye-3D ngalolu hlobo lwamapuleti.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » I-Arduino » Bakha i-chess ngepuleti Arduino UNO
Yakha Umfana Omkhulu Womdlalo Womhlaba nge-Raspberry Pi nokuningi kobuhlakani